News - Anyị nwere obi ike na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ n'ọdịnihu
Ná ngwụsị nke 17th China International Stationery and Gifts Fair (Ningbo Stationery Fair) na July afọ a, anyị hụrụ na dị ka nke mbụ nnukwu-ọnụ ọgụgụ agụmakwụkwọ n'ụlọ ụwa kemgbe ntiwapụ nke ọrịa, data nke dị iche iche ngosi ka ruru ohuru ohuru. N'otu oge ahụ, ihe omume ahụ mebiri ókè nke oge na ohere, na ụlọ ọrụ ndị si mba ọzọ n'ọtụtụ ebe gburugburu ụwa ahapụghị ụlọ ha "igwe ojii" iji soro ndị ngosi gosipụtara. Ka anyị jupụta na ozi banyere ọdịnihu mmepe nke ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ agụmakwụkwọ.
Dịka ememme ụlọ akwụkwọ kwa afọ bidoro mgbe ọrịa ahụ mechara, ihe ngosi ahụ ruru ọkwa dị elu wee debe ndekọ ọhụụ maka ụlọ ọrụ agụmakwụkwọ na mpaghara Asia-Pacific. Na mkpokọta 35,000 square mita nke ụlọ ngosi ihe ngosi ise, ngụkọta nke ụlọ ọrụ 1107 iji kere òkè na ihe ngosi ahụ, guzobere ụlọ ntu 1,728, ndị ọbịa 19,498.
Ndị na-egosi ihe a sitere na mpaghara 18 na obodo ndị gụnyere Zhejiang, Guangdong, Jiangsu, Shanghai, Shandong na Anhui, na ụlọ ọrụ si Wenzhou, Duan, Jinhua na isi ụlọ ọrụ ise ndị ọzọ na-eweta akwụkwọ na mpaghara Zhejiang sonyere na ngosi ahụ. Ulo oru Ningbo ruru 21% nke ngụkọta. Na yiwu, Qingyuan, Tonglu, Ninghai na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-emepụta ngwa ngwa, gọọmentị ime obodo ga-ebute ụzọ iji hazie ma chịkọta ụlọ ọrụ na mpaghara n'okpuru ikike ya isonye na ngosi ahụ n'otu otu.
Ndị na-eme ihe ngosi wetara ọtụtụ iri puku ngwaahịa ọhụrụ, na-ekpuchi ụlọ ọrụ desktọọpụ, ihe ederede, ihe ndị e ji eme ihe, ihe ndị a na-amụrụ ihe, ọfịs ọfịs, onyinye, ọrụ ụlọ na ngwa nhazi yana akụkụ, metụtara ụdị ụlọ ọrụ ọfịs niile na usoro mgbago na mgbada.
N'ihi na ntiwapụ nke ọrịa, ọtụtụ n'ime ndị isi ụlọ agụmakwụkwọ gara ihe ngosi ọnụ. Na nke a ningbo ụlọ ngosi, na mgbakwunye na iche iche si Ninghai, Cixi, Wenzhou, Yiwu, Fenshui na Wuyi, Qingyuan Bureau nke Commerce na Qingyuan pensụl Industry Association hazie 25 isi ụlọ ọrụ ndị dị otú ahụ dị ka Hongxing, Jiuling, Meimei na Qianyi isonye na ihe ngosi ke akpa ini. Obodo Tonglu Fenshui, nke amara dika “Obodo ndi China eji acho akwukwo”, ihe eji enyere mmadu aka nke oma “Tiantuan” putara ihe ngosi a, iji weputa ebumnuche nke "ka uwa onye obula."
Ningbo agụmakwụkwọ ngosi ụlọ ọrụ bụkwa ndị mbụ na "ígwé ojii". E guzobere ụlọ ngosi ihe ngosi ahụ na ebe ngosi ihe mgbe ochie iji jide oge ịzụ ahịa n'ịntanetị. Ọtụtụ ndị na-eme ihe ngosi na-ezukọ na igwe ojii, ụfọdụ ndị na-eme ihe ngosi na-achọkwa ụzọ ọhụrụ site na "mgbasa ozi ndụ" na "igwe ojii na ngwongwo". Ningbo agụmakwụkwọ ngosi center guzobere a pụrụ iche na netwọk akara na Mbugharị video ogbako ụlọ na-aghọta ihu na ihu na nkwurịta okwu n'etiti esenidụt azụ ahịa na anụ ụlọ ụlọ ọrụ. Ihe data anakọtara na ntụpọ ahụ gosiri na ndị ahịa 239 si mba ofesi na mba ụwa 44 ga-ejikọ vidiyo na ndị na-ebubata ya na 2007.